Qandho - Somali Kidshealth
Ka soo qaad cunnugaagii dugsigii ama iskuulkii buu ka soo noqday isagoo daalan ama xumadi hayso. Hooyadu markiiba gacanteeda ayay ilmaha wajigiisa saartaa bal heerkulka jirka cunnugu inuu koreeyo iyo in kale. Amaba waxaa la isticmaali karaa thermometer si loo ogaado heerka heerkulka jirka.
Waxaa la is-waydiiyaa dhowr su’aalood oo kala ah:-
Waa maxay Qandho?
Qandho waa marka jirka aadamiga uu soo galo organism jeermi ah oo waxyeelo u gaysan kara jirka. Waa jawaab-bixin jirku ka baxsho inuu iska difaaco jeermigaas, oo lagaga hortago kulayl ay maskaxdu amarto in jirka heerkulkiisa kor loo qaado. Sida badan heerkulka caadiga ah jirkeenu waa 37.5C, laakiin marka qandho timaado wuxuu gaaraa ilaa 38.5C-40C.
Cilmi-baaris la sameeyay waxay sheegaysaa qaybta maskaxda ah ee kor u qaada heerkulka jirka waxaa la yiraahdaa Hypothalamus. Marka qofku qandhado waxaa kor u kaca heerkulka iyadoo ay soo kororto dhaxan iyo gariir uu qofka qandhani u maleeyo inuu qabow hayo, laakiin ay tahay in jirku uu rabo inuu sameeyo kulayl saa’id ah oo jeermiga lagu dilo. Waxaa la yiraahdaa qandhadu waa difaac dabiici ah oo binu-aadamigu isaga difaaco jeermiga cudurada keena.
Maxaa keena Qandhada?
Sidaan horay u sheegnayba qandhada waxaa keena jeermi ama organism il-ma-aragtay ah oo jirka soo gala.Waxaa ka mid ah jeermiskaas kuwaan hoosta ku qoran:
Protozoa sida jeermiga Malaariyada,ama Ameebaha.
Sidee loo daaweeyaa Qandhada?
Inta badan qandhada carruurta ku dhacdaa dhib wayn uma gaysato waayo marka la ogaado sababta qandhada keentay oo daawayn ay timaado heerkulka jirku caadi buu ku soo noqonayaa. Inta badan dhaqaatiirtu waxay isku raacsan yihiin in carruurtu aysan u baahnayn qandho-jabin haddii uusan aad u sarayn heerkulka jirkoodu.
Ciyaalka aadka u yar yar iyo kuwa umusha lagula jiro way ka duwan tahay xaaladoodu oo waxay u baahan yihiin in heerkulkooda si joogto ah loola socdo.
Carruurta qandhadoodu sarayso ama ay hoos u dhici waydo waxay u baahan yihiin daawayn qandho-jabin ah. Daawooyinkaas waxay maskaxda u sheegaan in heerkulka jirka hoos loo dhigo. Labada daawo ee ugu caansan ee carruurta la siiyo waxay kala yihiin Paracetamol iyo Ipubrufen. Carruurta waxaa ka mamnuuc ah in la siiyo daawada Aspirin oo ku keeni karta khatar aad u wayn.
Waxaa kaloo muhiim ah in waalidiintu carruurta qandhaysan siiyaan cabitaan iyo sharaab si jirka looga ilaaliyo fuuq-bax maadaama marka qofku qandhan yahay uu dhidid badan ka baxo.